DAAWO:Dagaal culus oo Goor Dhoweyd ka qarxay Tukaraq+Dhimasho Iyo Dhaawac kala gaaray ciidamada Puntland iyo Somaliland | Afrikada
DAAWO:Dagaal culus oo Goor Dhoweyd ka qarxay Tukaraq+Dhimasho Iyo Dhaawac kala gaaray ciidamada Puntland iyo Somaliland
Afrikada, Tukaraq: Warar aynu ka helayno degaanka Tukaraq ayaa sheegaya in dagaal xoogan uu ka dhex qarxay ciidamada Puntland iyo Somaliland oo weli isku hor fadhiya forimaha hore ee dagaalka degaankaasi.
Wararku waxa ay sheegayaan in dhaawacyo iyo dhimasho ay jirto iyadoo labada dhinac ay is-duqeynayaan iyaga oo adeegsanaya madaafiicda ridada dhexe. Dagaalkii maanta ayaa ka dhashay kadib markii ciidammada Puntland ay hore ugu sikadeen forimaha ay fadhiyaan ciidamada Somaliland, taas oo sababtay in dagaalku sii cuslaado.
Hugunka madaafiicda ayaa weli la maqlayaa waxaana TUKARAQ dhowr dhinac ka hareereeyay ciidanka Puntland oo ku garaacaya madaafiicda goobta.
Dhanka kale weli ma ay jiraan dadaallo lagu dhex dhexaadinayo labada dhinac, tani iyo intii uu ergayga Qaramada Midoobey halkaasi tegayna ma jiraan mas’uuliyiin kale oo soo faro geliyay arrinta Tukaraq.